नायिका सुरक्षाका लागि ‘भैरे’ कति महत्वपूर्ण ?
Home / समाचार / नायिका सुरक्षाका लागि ‘भैरे’ कति महत्वपूर्ण ?
नायिका सुरक्षाका लागि ‘भैरे’ कति महत्वपूर्ण ? 0
नायिका सुरक्षा पन्त चलचित्र ‘अझै पनि’ बाट नेपाली रजतपटमा पाइला चालिन । तर उनको पाइला सफल रुपमा अगाडी बढ्न सकेन । केही समयको ग्यापमा उनले चलचित्र ‘धनपति’मा काम गरिन । उनको अभिनयको प्रशंशा भएपनि ‘धनपति’ले पनि उनको चलचित्र क्षेत्र सुःखद बनाउन सकेन् ।
उनै नायिका अहिले चलचित्र ‘भैरे’को छायांकनमा व्यस्त छिन् । सुरक्षाका लागि यो चलचित्र राम्रो बन्नु र चल्नु आवश्यक छ । त्यसलै पनि सुरक्षाले निकै मेहनतका साथ काम गरेकी छिन् । एभरेष्ट सूर्य बोहराको निर्देशनमा छायाँकन भैरहेको चलचित्रमा नायक दयाहाङ राईको जोडीको रुपमा सुरक्षाले काम गरिरहेकी छिन् । जुन कुरा सुरक्षाले आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरेको माथिको तस्वीरले पनि प्रष्ट पार्छ । चलचित्र क्षेत्र सुःखद बन्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो करियर ‘भैरे’ले सुःखद बनाउने सुरक्षाको विश्वास छ । र त्यो उनका लागि आवश्यक पनि छ ।
चलचित्रमा नायिका बर्षा सिवाकोटी पनि शिर्ष भूमिकामा छिन् । चलचित्र ‘भैरे’ मा सुनिल थापा, वुद्धि तामाङ, विक्रान्त बस्नेत, जाहन्वी बोहरा लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ ।
धर्म–संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छः राष्ट्रपति